एआइबिटीको अर्को कलेज पनि खारेज । हजारौ विद्यार्थी मर्कामा । अब के गर्ने ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » News » एआइबिटीको अर्को कलेज पनि खारेज । हजारौ विद्यार्थी मर्कामा । अब के गर्ने ?
एआइबिटीको अर्को कलेज पनि खारेज । हजारौ विद्यार्थी मर्कामा । अब के गर्ने ?
Nepaltube Australia Published On : 29 May, 2019
अष्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी ( आस्क्वा) ले एआइबिटीको अर्को कलेजको दर्ता पनि खारेज गरिदिएको छ ।
इन्टरनेशनल इन्सटिच्युट अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल प्रालिको दर्ता खारेज भएको हो । खारेजीसंगै त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली लगायत संयौ विद्यार्थीको पढाई अन्यौल बनेको छ ।
यदपी कलेजले माथिल्लो निकाय एडमिनिष्ट्रेटिभ अपिल ट्रिब्युन (एएटी) मा पुनरावेदन भने गर्न पाउछ ।
तीन महिनाअघि एकै नामको एआइबिटी कलेजको दर्ता खारेजी हुदा १ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए ।
दुबै कलेज एकै व्यक्ति र संस्थाले संचालन गरेको पाइएको छ ।
नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्ने कलेज पटक पटक खारेजीमा पर्दा उनीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने देखिन्छ ।
तीन महिना अघि खारेज भएको कलेजको दर्ता सम्बन्धि अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कलेजले एएटीमा गरेको पुनरावेदन पटक पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरेपछि विद्यार्थीहरुले पनि ठोस कदम लिन सकेका छैनन ।
अब के गर्ने भनेर अन्यौलमै रहेका बेला त्यहि नामको अर्को कलेज पनि बन्द हुने भएपछि नेपाली विद्यार्थीमाथी अर्को बज्रपात परेको छ ।
हाल अष्ट्रेलियामा ५० हजारको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । नेपाल अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी पढाउने तेस्रो ठुलो राष्ट्र समेत हो ।
तर, नेपाली विद्यार्थीको उल्लेख्य संख्या रहेको कलेजहरु नै भटाभट मापदण्ड नपुगेको भन्दै बन्द हुन थालेपछि नेपालीबाट विद्यार्थीआउने प्रकृयामै त्रुटी भएको देखिन्छ ।
खासगरी नेपालबाट कलेज छान्दा खेरी नै शैक्षिक परामर्शदाता र स्वयम् विद्यार्थीले नै हेलचक्राइ गरेका छन् ।
बढी कमिसनको लोभमा शैक्षिक परामर्शदाताले मापदण्ड नपुगेका कलेजमा विद्यार्थी पठाउन जोड दिने तथा विद्यार्थीहरु पनि जसरी पनि अष्ट्रेलिया जाने सोचमा आफुले पढ्ने कलेजका बारेमा अध्ययन नगर्ने प्रवृतिले यस्ता घटना दोहोरीरहेको जानकारहरु बताउछन् ।
एआइबिटीले नेपाली शैक्षिक परामर्श दाता (कन्सल्टेन्सी)लाई एउटा विद्यार्थी वापत शुल्कमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको जानकारहरु बताउछन् ।
अब प्रश्न उठ्छ ? कमिसन कै लागि मापदण्ड नपुगेका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराउनु कन्सल्टेन्सीको नैतिकताभित्र पर्छ ?
यो अहिलेको मुल प्रश्न हो । मापदण्ड नपुगेका कलेज बन्द हुनु सामान्य प्रकृया नै हो । तर, लाखौ रुपैया खर्च गरेर आएका नेपाली विद्यार्थीको भविष्य के हुने भन्ने कुराले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
अष्ट्रेलियामा कलेज बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीले के के गर्नुपर्छ भनेर व्रिजवेनका शैक्षिक परामर्शदाता अभिमानसिंह बस्नेतले हामीलाई यसरी जानकारी दिनुभयो ।
२. टिपिएसले अहिले डिप्लोमा पढ्दा आएका विद्यार्थीलाई डिप्लोमाकै अवसर दिनसक्छ । तर, कति विद्यार्थीले सिधै ब्याचलर गर्नपनि मापदण्ड पु¥याएर पढ्न पाउछन् ।